China YIHOO PA (polyamide) polymerization & izilungiso zotshintsho Ukwenziwa kunye nefektri | Yihoo
Ke ngoko, kuyimfuneko ukuphucula ezinye iipropathi ngokulungiswa kwendawo ethile yesicelo yokwandisa indawo yokusebenza kwayo. Ngenxa yeempawu zokuqina okuqinileyo, i-PA ine-hygroscopicity eyomeleleyo kunye nozinzo olubi, kodwa inokuphuculwa ngokuguqulwa.
Apha ngezantsi kwezongezo kunokuphucula kakhulu ukusebenza kwi-PA:
ISIQINISEKISO SOKUKHANYA YIHOO LS519 42774-15-2 NYLOSTAB S-EED Njengokunyibilika kokunyibilika okanye ukunyibilika kwenkqubo yokunyibilikisa ukuphucula umgangatho weemveliso zepolyamide ekubunjweni ngenaliti kunye nokubumbela ukubumba okanye ukukhupha, kunye namazinga asezantsi okuphuka kwentambo ngexesha lokujikeleza kwefibre.
ISIQINISEKISO YIHOO AN445 36443-68-2 IRGANOX 245 Ingakumbi ifanelekile kwi-phenolic antioxidants yeepolymers eziphilayo. Ngokukodwa ifanelekile i-HIPS, ABS, MBS, SB kunye ne-SBR latex kunye ne-POM monomer kunye ne-copolymer, inokusetyenziswa njengesiqinisi kwi-PU, PA, thermoplastic PE, PVC, njl.
YIHOO HN130 69938-76-7 Ukusetyenziswa ngokubanzi kwiprofayili ye-PU, izinto zezihlangu, iplastiki kunye nenkqubo yokuvelisa ifayibha ye-PU; inokusetyenziswa njenge-antioxidant, someleza, kwaye inokuthatha inxaxheba ekuphenduleni kwepolymerization; Ingasetyenziselwa njengearhente echasene nokutyheli kwityhefu ye-PU.
YIHOO HN150 85095-61-0 Isetyenziswe kwi-PU, njenge-spandex fiber, isikhumba sokwenziwa, isikhumba sokufakelwa njalo njalo kwiarhente yokuthintela ubutyheli.
YIHOO AN3052 61167-58-6 I-ANTIOXIDANT GM ilungele i-PO, i-PE, i-polystyrene, i-resin ye-ABS kunye ne-polyvinyl chloride, njl njl.
YIHOO AO80 90498-90-1 I-GA-80 Ubunzima obuphezulu beemolekyuli ezivaliweyo ze-phenolic antioxidant, inokusebenza okungcono kokuguga xa isetyenziswa ngokudibeneyo ne-phosphite ester antioxidant kunye ne-macromolecule sulphur antioxidant.Ifanelekile kwiiplastikhi ezininzi, ipolyolefin, njl.
YIHOO AN1098 23128-74-7 IRGANOX 1098 Isetyenziswa ikakhulu kwi-PA, PO, polystyrene, ABS resin, acetal resin, PU, ​​irabha kunye nezinye iipolymers.
YIHOO AN1171 AN 168: 31570-04-4 ； AN 1098: 23128-74-7 IRGANOX 1171 Umxube we-antioxidantfor PA iimveliso zokubumba, imicu kunye neefilimu.
ILANGAMANI LIYABUYEKA YIHOO FR930 / Ingasetyenziswa kwi-nylon yeqondo lobushushu eliphezulu ngozinzo lobushushu obuphezulu. Ifanelekile ifayibha yeglasi eqinisiweyo kwaye ingqiniswanga. Imveliso yokugqibela ineempawu ezibonakalayo nezomzimba.
Egqithileyo YIHOO Non-Flame Flame nekudodobalisa Abavelisi - YIHOO DB (lyu) izincedisi amagwebu - YIHOO
Okulandelayo: I-YIHOO DB (polyurethane) izongezo ezinegwebu
IPolamide UV Absorber
Polyamides Flame nekudodobalisa